Xisbiyada Somaliland oo heshiis rasmi ah ka gaaray arrimaha doorashooyinka Maamulkaasi | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Xisbiyada Somaliland oo heshiis rasmi ah ka gaaray arrimaha doorashooyinka Maamulkaasi
Xisbiyada Somaliland oo heshiis rasmi ah ka gaaray arrimaha doorashooyinka Maamulkaasi
Hargeysa (DOOXO NEWS) – Hoggaanka xisbiyada Somaliland ayaa maanta heshiis cusub oo ku aadan arrimaha doorashooyinka maamulkaasi ku gaaray Hargeysa.
Hoggaanka saddex xisbi ee kala ah Kulmiye, UCID iyo Wadani oo yeeshay kulan saacado badan qaatay ayaa waxa ay heshiis rasmi ah ka gaareen doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee maamulkaasi.
Sidoo kale heshiiskan ayaa bedalaya kii ay horey u wada gaareen xisbiyadaasi 27-kii bishii Febaraayo ee sanadkan 2020-ka.
Qodobada xasaasiga ah ee ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah:-
1: In Guddiga doorashooyinka ay u madax bannaan yihiin Gudashada wajibaadkooda ku aadan howlaha doorashooyinka.
5: Saddexda Xisbi waxaa ay ku heshiiyeen in torakoob qaran laga sameeyo guud ahaan degaannada Somaliland kadibna la qabto Doorashada Golaha Wakiilada Soomaaliland